Akhriso:-Shaqaalaha Gobolka Banaadir Oo La Fasaxay – Hornafrik Media Network
Kadib markii Arbacadii la soo dhaafay Qarax uu dhacay Hoolka Shirar lagu qabto ee Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa waxaa Maanta la shaaciyay in la fasaxay Shaqaallaha maamulka Gobolka.
Afhayeenka Gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo Maanta Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in Shaqaalaha Gobolka la fasaxay muddo Saddex Maalmood ah.
Sidoo kale Saalax Dheere ayaa waxaa uu ka hadlay Qaraxii ka dhacay Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir,kaasi oo sababay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dadkii halkaas ku dhintay ayuu tacdi u diray,isagoona kalena kuwa dhaawacmay oo uu kamid yahay Guddoomiyaha Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow Alle uga baryay inuu Caafimaad deg deg ah siiyo.
Isaga oo sii hadlayay Saalax Xasan Cumar ayaa waxaa uu tilmaamay in Guddii loo xilsaaray baarista qaraxii Xarunta Gobolka ay wadaan baaritaano kala duwan,isla markaana wixii kasoo baxa ay Bulshada la wadaagi doonaan.
Sikastaba Arbacadii la soo dhaafay ayaa qarax waxaa uu ka dhacay Hoolka Shirar Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir,waxaana xiliga uu dhacayay socday shir looga hadlayo amniga Caasimadda,isla markaana a goobjoog ka ahaayeen Duqa Muqdisho,inta badan Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir,Agaasime Waaxeedyo iyo xubno kale oo ka tirsan Xafiiska Guddoomiye Yariisow.
Wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliya oo loo yeeray.